एकअर्काबाट के चाहन्छन् अमेरिका र भारत ? | Kendrabindu Nepal Online News
एकअर्काबाट के चाहन्छन् अमेरिका र भारत ?
१२ फाल्गुन २०७६, सोमबार १२:४३
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पहिलो आधिकारिक भारत भ्रमणमा रहेका छन् । ट्रम्प भारत भ्रमण गर्ने अमेरिकाका सातौं राष्ट्रपति हुन् ।
ट्रम्पको दुईदिने भ्रमणको प्रभाव भारतमा मात्र नभई पुरा दक्षिण एशियामा नै पर्ने छ । भारतमा रहंदा ट्रम्प त्यहा“का तीन शहर पुग्नेछन् । राजधानी दिल्ली, आगराको ताजमहल र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहनगर अहमदावाद । त्यहा“ उनी र्यालीमा सहभागी हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीको गृहराज्य गुजरातमा ट्रम्पको भव्य स्वागत गरिंदैछ । अहमदावाद शहरमा निकालिने ट्रम्पको रोड शोमा लाखौंको सहभागिता रहने बताइएको छ । मोदीका लागि अघिल्लो वर्ष अमेरिकाको टेक्सस राज्यको ह्युस्टन शहरमा यस्तै किसिमको कार्यक्रम ‘हाउडी मोदी’को आयोजना गरिएको थियो । ट्रम्पका लागि अहमदावादको रोड शो त्यस्तै किसिमको कूटनीतिक जवाफ हो ।
ह्युस्टनको उक्त र्‍यालीमा ५० हजार भारतीय समर्थकमाझ मोदीले सम्बोधन गरेका थिए । अमेरिकामा भारतीय डायस्पोराको उदयसँगै त्यसको प्रभाव देखेका ट्रम्पको यसपटकको भारत भ्रमण पनि आगामी राष्ट्रपति निर्वाचन लक्षित रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
अमेरिकामा यसै वर्षको नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुदैछ । ट्रम्प दोस्रो पटक ह्वाइट हाउस प्रवेशका लागि चुनाव लड्दैछन् । अमेरिकामा २४ लाख भारतीय आप्रवासीको बसोवास छ । ती मध्ये अमेरिकाभरि करीब आठलाख त भोटर नै छन् । यसैको प्रत्यक्ष फाइदा ट्रम्प उठाउन चाहान्छन् । त्यसैले पनि यो भारत भ्रमणले ट्रम्पलाई दोस्रो कार्यकालका लागि ह्वाइट हाउस प्रवेशका लागि सम्भावना बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
ट्रम्पको यो भ्रमणमा भारत–अमेरिकाबीच महत्वपूर्ण व्यापार सम्झौता हुने अनुमान गरिएको छ । भारतको डेरी, पोल्ट्रि र ई–कमर्श बजारमा अमेरिका बेरोकटोक पहुँच होस् भन्ने माग गरिरहेको छ ।
सन् २००८ मा भारत र अमेरिकाबीच रहेको ६६ अर्ब डलरको व्यापारिक कारोवार सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा १ सय ४२ अर्ब डलर पुगेको छ । मोदी यो सम्झौतामा अझै उचाइ चाहान्छन् ।
त्यसो त पछिल्ला वर्षमा भारत र अमेरिकाबीच केही व्यापारिक तनाव बढेको छ । अमेरिकामा बनेको हार्ली डेविडसन मोटरसाइकल माथिको आयात शुल्क अत्याधिक रहेको र त्यसलाई घटाउने माग भारतले गरिरहेको छ । तर अमेरिकाले त्यसलाई सुनेको छैन ।
अमेरिकाका तर्फबाट व्यापार वार्ता गरिरहेका रोबर्ट लाइजर राष्ट्रपति ट्रम्पसँगै भारत भ्रमणमा नआउने खबरले भारतलाई चिढ्याएको छ । वार्ताकार लाइजरका कतिपय व्यापार नीति भारतलाई पाच्य छैन । तर, यसपटक भारतसँग धेरै ठूलो व्यापारिक ‘डील’ नहुने ट्रम्प आफैंले बताइरहेका छन् ।
यस्तै, यो भ्रमणको महत्पूर्ण एजेण्डा भनेको दुई शक्ति राष्ट्रवीच हुने रक्षा सम्झौतालाई मानिएको छ । भारत–अमेरिकाबीच यसपटक के कस्ता रक्षा सम्झौता हुने भन्नेवारे केही खुलाइएको छैन । तर, भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले दुई मुलुकबीच रक्षा सम्झौता हुने सम्भावना बलियो रहेको बताइरहेका छन् ।
भारतले अमेरिकाबाट अत्याधुनिक रक्षा सामाग्रीका साथै हेलिकप्टर किन्ने इच्छा देखाइरहेको छ । सन् २००८ मा भारत र अमेरिकाबीच रक्षा सम्झौता शून्य बराबर रहेको थियो । किनभने परम्परागत रुपमै भारत रक्षा उपकरणका लागि रुससँग भरपर्ने गर्दथ्यो । तर, मोदी दिल्लीको शक्तामा आइकन भारतले विश्वशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग रक्षा सामाग्री किन्ने इच्छा देखाइरहेको छ ।
अघिल्लो वर्ष भारतले अमेरिकासँग १५ अर्ब डलर बराबरको रक्षा सामाग्री किनेको थियो । तर, यसपटक त्यसको वृद्धि व्यापक हुने अनुमान गरिएको छ । भारतले अमेरिकी कम्पनी ‘लकहीड मार्टिन’सँग अत्याधुनिक हेलिकप्टर किन्ने इच्छा देखाइरहेको छ । सम्भवतः ट्रम्पको यो भ्रमणले भारतलाई त्यसको बाटो खोलिदिनेछ ।
भारतीय संविधानले कश्मिरलाई दिएको विशेषाधिकार आर्टिकल–३७० हटेपछि ट्रम्पले भारत–पाकिस्तानबीच जारी तनाव कम गर्न आफू मध्यस्थताका लागि तयार रहेको प्रतिक्रिया पटक–पटक दिएका थिए । यसपटक कश्मिरको उक्त मुद्धा पनि ट्रम्पले दिल्लीमा रहेका बेला उठाउनेछन् । पाकिस्तानले ओगटेको कश्मिरको भूभाग आफू मातहत फर्काउन दिल्लीले वासिगंटनसँग राय माग्दैछ । त्यसका लागि ट्रम्प भारतको भ्रमणमा रहेकोजस्तो उपयुक्त मौका अर्को हुने छैन । भारत यो महत्वपूर्ण मामलामा अमेरिकावाट प्राप्त हुने वैधता चाहान्छ ।
त्यस्तै, चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ, अमेरिकाको रणनीतिक योजना इण्डो प्यासिफिक स्ट्रटेजी र क्षेत्रिय शक्ति राष्ट्र बन्न लम्किरहेको भारतीय चाहानामाथी पनि ट्रम्प र मोदीवीच महत्वपूर्ण छलफल हुने निश्चित छ ।
ट्रम्पको भ्रमण फलदायी बनाउन दिल्लीले कुनै कन्जुस्याई नगर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाइरहेका छन् ।
Prevविष्णु माझी र ढाकाराम पौडेलको ‘मलेवा चरी’ सार्वजनिक
गाडीको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु भएपछि स्थानियद्वारा बिपी राजमार्ग अवरुद्धNext
‘अमेरिकाले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने समय पर सार्दैन’: राष्ट्रपति ट्रम्प